DANBAL BAALEEOromoorraa duuti kandhaabbattu saaminsi kandhaabbatu gaafa ABO n paartii biyya bulchu ta’e qofaadha – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDANBAL BAALEEOromoorraa duuti kandhaabbattu saaminsi kandhaabbatu gaafa ABO n paartii biyya bulchu ta’e qofaadha
Oromoorraa duuti kandhaabbattu saaminsi kandhaabbatu gaafa ABO n paartii biyya bulchu ta’e qofaadha.
G/Q,/Wallaggaa aanaa Gaawoo Qeebbee
Waraanni ADWUI guyyaa har’aa namoota nagaa sadii aanaa
Gaawoo Qeebbeetti ajjeeste keessaa maqaan isaanii kan arganne
Gamulaa Maammad fi Fiqaaduu Taaffasee kan jedhamu yammuu
ta’u namoota isheen qabdee fuutee deemte immoo
3.Fadiluu Waaqjraa kanjedhaman ukkaamsuun eessatti akka
isaan geessan hin beekamne.
“Shira guddaa Godina Baalee keessatti xaxamaa jiru.
Godina Baaleetti aangawoonni ODP fi paartiin ABOT (ABO Tokkoome) shira qopheessuun maqaa WBO galchuutiin burjaajjii uumaa jiru.
Innis akkas ture:
Miseensonni WBO duraanii waggaa dheeraan dura qabsoorra turan kan yeroo ammaa gara maatiifi qe’ee isaaniitti deebi’uun jireenya dhuunfaa isaanii jiraachaa jiran aanaalee baadiyyaafi bakkoota adda addaa irraa walitti qabuun gara magaalaa Roobeetti waamanii akka waan WBOn simatamuutti uummata sossobaa jiru.
Qabsaa’ota miseensota WBO duraanii kana yommuu dubbisan “magaalaa Roobeetti mariif isin barbaanna; isin qabsoo Oromoo keessatti gumaacha waan qabdaniif akka mootummaatti mari’annee hojiitti isin ramadna” jechuun walga’iif waamanii jiru.
Faallaa kanaa uummata magaalaa Roobeetti yommuu himan “Miseensonni WBO kan roorroo uummata Oromoo irraa kaasuuf lubbuu kennanii qabsoo hidhannoorra turan ammammoo haala mijataa biyya keessatti uumameen jijjiirama kana tumsuufi gara qabsoo karaa nagaa geggeessuuf waamicha uummataa dhaga’anii galaa jiru waan ta’eef simannaaf qophaa’aa” jechuun uummata sossobaa jiru.
Gabaabinaan, shira xaxxoonni kun yommuu namoota miseensota WBO duraanii kana dubbisan akka waan mariif barbaadaniitti itti himu; uummatatti yommuu himan akka waan WBOn bosonaa ba’ee galaa jiruutti itti himu.
Kana waan ta’eef, uummanni Oromoo Godina Baalee dhimma kana quba qabaachuun akka hordoftan dhaammanna.
Shirri kun Qabsoo Bilisummaa Oromoo laamshessuuf kan aggaamame ta’us shira xaxxoota galaafata.”